ISIKHOKELO SENDLEKO YOKULUNGISA IKHITSHI (IXABISO LOKUHLAZIYA IKHITSHI) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Isikhokelo seNdleko yokuLungisa iKhitshi (Ixabiso lokuhlaziya iKhitshi)
Isikhokelo seNdleko yokuLungisa iKhitshi (Ixabiso lokuhlaziya iKhitshi)
Uqikelela njani indleko zokuhlaziya iikhitshi lakho
Kubalulekile ukuba wenze isicwangciso sokuchitha ukuze iprojekthi yakho yokulungisa ikhitshi ingaphuli uhlahlo-lwabiwo mali. Nanini na xa ucinga ukwenza iprojekthi uqwalaselo lokuqala kufuneka lube luxabiso olungakanani kuwe. Ukukunceda ekumiseleni uhlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi yokulungisa ikhitshi unokufuna ukuqaphela isitayile sakho sokumiswa kwekhitshi kunye nokhetho lwakho. Jonga eyethu Izimvo zoyilo ekhitshini Isikhokelo sokubona iindawo ezithandwa kakhulu kunye nezitayile.
Izinto ezichaphazela iindleko zolwakhiwo
o Izinto zasekhitshini ezifuna ukulungiswa okanye ukutshintshwa
o Kukhethwa iikhabhathi, kugqityiwe, nakwizixhobo zombane
Ukubandakanya okanye hayi, isicwangciso sokuhambisa izinto okanye ukongeza indawo kwi
Ukuseta uhlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi yakho yasekhitshini kuya kufuna uphando oluthile. Kuya kuthatha iinzame ukufumana ukuba zeziphi izinto, ezigqityiweyo, iimveliso kunye neempawu oza kuzifuna ekhitshini lakho ezikhoyo kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho. Unokwenza oku ngokuya kumagumbi okubonisa, ujonge kwiimagazini, undwendwele imiboniso yorhwebo, kwaye wenze uphando kwi-intanethi ngezixhobo. Ngaba unoluhlu lweminqweno emva koko unokuluguqula njengoluhlu lwenyani njengoko sele luza kuba neethegi zamaxabiso kwinto nganye oyifunayo.
Qiniseka ukuba unezicwangciso ezimbini zokhetho lwezinto ozifunayo ezifana nezixhobo zombane, iithayile, iitafile kunye nokunye. Ngale ndlela, umyili uya kuba nakho ukusebenza kuhlahlo-lwabiwo mali ngokokukhetha kwakho kokugqibela.
Umyinge wepesenti yeendleko kuhlahlo-lwabiwo mali lweekhitshi
Iindlela ezidumileyo zokuhlaziya ikhitshi
Uqikelelo lweendleko zeKhitshi ngeenyawo zenyawo nganye
Iindleko zokuLungiswa kweKhitshi elincinci (iinyawo ezingama-70 zeenyawo)
Iindleko eziPhakathi zokuLungiswa kweKhitshi (iinyawo ezili-100 zenyawo)
Iindleko ezinkulu zokuLungiswa kweKhitshi (i-200 + yeenyawo zenyawo)
Uqikelelo loLungiso lweKhitshi
Iindleko zokuLungiswa kweKhitshi
Iindleko zeKhabinethi yeKhitshi
Iindleko zeeTafile zeKhitshi
Iindleko zoMgangatho weKhitshi
Iindleko zoKhanya kweKhitshi
Iindleko zeZinto zaseKhitshini
Ixabiso leZinto zaseKhitshini
Ukongezwa kweKhitshi yokuLungisa iKhitshi yokuCinga
Ukulungiselela ukuLungiswa kweKhitshi
Ukuze ube noqikelelo olulungileyo lweendleko zeprojekthi yakho, ungasebenzisa ithuba lokulungisa kwakhona ikhitshi yokubala iindleko. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukwahlula iindleko eziyimfuneko kwaye ube noqingqo-mali lwendleko nganye efunekayo.
1. Isikwere semifanekiso kunye nomgangatho
2. Izixhobo, ipeyinti kunye nodonga olomileyo
3. Iikhabhathi, imiphezulu yeetafile kunye nezibane
4. Fumana ubalo lwakho
La ngamanyathelo okufumana ukubalwa kwenkcitho yakho. Ukuze ufumane ezona zibalo zichanekileyo, unokucinga ngokundwendwela indawo, http://kitchen.installationcalculator.com , kwaye uqalise ubalo lwakho lokwenyani.
Ngapha koko, kunokuba luncedo ukuba unolwazi kukonakaliswa kweendleko. Ukuba nedatha kuya kukwenza ukuba uqikelele iimfuno zakho kuhlahlo-lwabiwo mali kwaye uhlengahlengiso oluyimfuneko lunokwenziwa. Apha ngezantsi kukho uluhlu lweendleko ezifunekayo oza kuthi uhlangane nazo eziya kufuna ukubekwa phambili:
Iipesenti ezingama-35 zeekhabhathi
Iipesenti ezingama-20 zomsebenzi
Iipesenti ezingama-20 zezixhobo zombane
Ipesenti ye-10 yeefestile
Ipesenti ezi-5 zokulungiswa
- 3% yezilinganisi
Iipesenti ezisi-7 zezinye iindleko kubandakanya inkcitho engalindelekanga
(Ukwazi oku kuya kukunceda kuhlahlo lwabiwo-mali)
- Ikhabhinethi kunye nemiphezulu yeetafile zinokuthi zithathelwe indawo ngamacandelo akumgangatho ophakathi
-Ukutshintsha uyilo kuyilo Ikhitshi elimile L , ezimile njl.
Izixhobo ezisetyenzisiweyo ziya kuba zezona modeli zintsha zokonga umbane
Utshintsho lwe imiphezulu yeetafile -Ukunyusela igranite, imarble, i-quartz okanye ezinye izinto zokulwa zangoku
- ufakelo lombhobho omtsha wesinki kunye nesinki
- endaweni yomgangatho
- Ukupeyinta ngombala kunye neendonga
-Ukongeza Isiqithi sasekhitshini okanye usingasiqithi
Ngokusekwe kwiCalfinder, malunga neepesenti ezingama-70 zeendleko zokulungiswa kwekhitshi zinokuphinda zifumaneke xa kuthengiswa kwakhona.
Xa ulungisa ikhitshi zininzi iindlela zokubala iindleko. Kwiiprojekthi ezininzi kuyakufuneka ukuba kuqeshwe ikontraka ukuba igqibe ubuncinci bomsebenzi. Rhoqo iikontraka ziyaqeshwa zenze umsebenzi wombane, ufakelo kunye nemibhobho yamanzi. Kuba uninzi lweemodels aluyi kuba yinyani yeprojekthi ye-DIY silungelelanise amaxabiso ngokufanelekileyo kwiakhawunti yeefizi zonokontrakta ezongezelelweyo. Ukusebenzisa ukugqitywa okuphezulu kunye nezixhobo eziphakamileyo nazo ziqwalaselwa ukwenza xa ugqiba uhlahlo lwabiwo-mali.
Ngonyaka ka-2009, uMbutho weSizwe weKhitshi kunye neGumbi lokuhlambela uthathela ingqalelo ikhitshi elincinci elincinci njengeenyawo ezingama-70 okanye ezantsi. Uya kuba nenketho encinci ekulungiseni ikhitshi ngakumbi ukuba ikhitshi lakho lincinci linendawo encinci yokusebenza nayo. Iindleko zokulungisa ikhitshi elincinci zixhomekeke kwinto eza kufakelwa, zilungiswe okanye ziphuculwe. Uninzi lwexesha, umndilili wexabiso umalunga ne- $ 5,000 ukuya kwi-15,000 yeedola.
Apha ngezantsi kukho ukubandakanywa okuqhelekileyo kulungiso lwekhitshi elincinci kunye neendleko zalo:
- Faucet kunye nokuphucula isinki
-Ukufakwa kwemiphezulu yeetafile okanye ukubuyisela izinto ezingabizi kakhulu
-I-tile yangemva yokongeza
-Ukufakwa kweekhabhathi zesitokhwe
- Uphahla kunye nokupeyinta kweendonga
-Ukugcina umbane okonga umbane ufakelo lweekhabhathi
Uqikelelo lweendleko zokulungisa ikhitshi encinci luboniswe ngezantsi:
-Ukufakwa kwesixhobo $ 100- $ 300 kwisixhobo ngasinye
-Ukufakwa kweekhabhathi $ 1,200- $ 3,200
- Ufakelo lweeTafile $ 900- $ 1,100
-Ukufakwa kwetephu ye-Faucet $ 130- $ 230 kwitephu nganye
- Ufakelo lomgangatho $ 700- $ 1,700
-Ukufaka isinki $ 500- $ 1,500
ukuba uchithe ntoni kwiringi yokuzibandakanya
Ikhitshi eliphakathi okanye elingu-10 'x 10' linomlinganiso weenyawo ezili-100 zekwere. Ithathwa njengomgangatho osemgangathweni wokuqikelelwa kweendleko zokulungiswa kwekhitshi. Olu hlobo lwekhitshi lulungele iindleko zasekhitshini. Indawo yanele ukulungiselela ukubekwa kwezinto zombane eziphambili. Umgangatho womgangatho ulungile ukuze ungagqithisi kubalo kuqikelelo.
Izinto zohlobo oluqhelekileyo lokulungiswa kwekhitshi kubandakanya inkcitho ziboniswe ngezantsi:
Ukufakwa kwesixhobo $ 400- $ 600 kuzo zonke izixhobo
Ukufakwa kweekhabhathi $ 3,500- $ 5,500
Ukufakwa kwee-countertops $ 2,100 - $ 4,100
Ukufakwa kwetephu ye-Faucet $ 330- $ 430 kwitephu nganye
Ukufakwa kumgangatho $ 1,800 - $ 2,800
Ukufakwa kwesinki $ 1,600- $ 2,100
Ikhitshi elinamakhulu amabini nangaphezulu ngaphezulu kwekhitshi likhulu kunobungakanani bekhitshi eliqhelekileyo kwaye isenokuba sele ibandakanya indawo yokutyela. Ixabiso lokuhlengahlengisa kwakhona lixhomekeke kuhlobo lotshintsho oluza kwenziwa, izinto eziza kusetyenziswa, kunye neendleko zabasebenzi.
Ikhitshi leenyawo ezingama-200 elinenyawo zeekhabhathi ezingama-30 liya kubiza malunga ne-21,400 yeedola. Ngobungakanani bomgangatho ofanayo wekhitshi, i-remodel ye-middle-range iya kubiza malunga ne- $ 57,200. Ukulungiswa okuphezulu kwekhitshi kuya kubiza uqikelelo lwama- $ 111,800.
Iindleko eziphambili zokulungiswa kwekhitshi kubandakanya ukubandakanywa kwayo kubonisiwe kwitafile engezantsi:
Ukufakwa kwesixhobo $ 700- $ 900 kwisixhobo ngasinye
Ukufakwa kweekhabhathi $ 6,500- $ 8,500
Ukufakwa kwee-countertops $ 5,100 - $ 7,100
Ukufakelwa kwetephu yefowuni $ 530- $ 630 kwifom nganye
Ukufakwa komgangatho $ 2,900 - $ 3,900
Ukufakwa kwesinki $ 2,200 - $ 2,700
Iindleko zokulungisa iikhitshi ziyahluka ngokobungakanani kunye nobungakanani beprojekthi. Ihlala ixabisa malunga ne-12,000 yeedola ukuya kwi-19,000 yeedola, ngexabiso eliphakathi le- $ 17,000. Uluhlu olungezantsi luqikelelo lweendleko zokulungiswa kwekhitshi lakho.
Iitafile zekhitshi- indleko ephakathi yofakelo imalunga ne- $ 3,401; Nangona kunjalo ixabiso liya kuhlala lixhomekeke kubungakanani bekhitshi, ubulula bokuyilwa, kunye nezinto ezisetyenzisiweyo.
Izixhobo ezitsha- ziya kuthi ngexabiso eliphakathi zibize malunga ne- $ 471 yofakelo lwezixhobo
- Umgangatho wekhitshi- uqikelelo lwe-avareji ye- $ 2,995 iya kuba yindleko yomgangatho
-Ukufakwa kwesinki-ukutshintshwa kwesinki esele ikhona kuya kubiza malunga ne- $ 150- $ 360, nangona kunjalo, ukufakelwa kwamasinki amatsha kuya kubiza ukuya kuthi ga kwi-3,500 yeedola
Unokuthathela ingqalelo ukutyelela indawo www.houzz.com/remodeling-cost . Banikezela ngendleko zeprojekthi yokulungisa ikhitshi ngokwendawo okuyo. Banoluhlu lweemveliso ezinamaxabiso azo onokuthi ujonge kwaye ukhethe. Zinezikhokelo onokuthi uziqwalasele ngokubhekisele kulungiso lwekhitshi. Ngapha koko, iingcali zidweliswe kunye nomsebenzi wazo wobugcisa kulungiso lwekhitshi.
Ngapha koko, unokuxhamla kwisixhobo esiqikelelweyo esisikhombisi sokubala seendleko zokupheka. Kuya kukunceda ukuba ubalwe ngokwenyani iindleko zeprojekthi yokulungisa izinto ezibandakanya izixhobo kunye nabasebenzi. Amaxabiso ezinto kunye nokufakwa kubalwa ngohlobo lwekhitshi nokuba lusisiseko, luphakathi, okanye luphezulu. Unokufikelela kwikhompyutheni yokulungisa i-intanethi ngokuya kwi http://www.remodelingcalculator.org/kitchen-remodeling-calculator/ .
Enye iwebhusayithi onokuyisebenzisa xa ubala iindleko zokulungisa iikhitshi www.isiliti.com/project_costs . Uyakufuna nje ukufaka idatha efunekayo ukuze ufumane uqikelelo lwangoku lweendleko zokulungiswa kwekhitshi kwindawo yakho ngekhodi ye-zip.
Zininzi izinto ezichaphazela iindleko zeprojekthi yokulungisa ikhitshi kubandakanya nolwakhiwo olusisiseko, ukulungiswa, ukuthengwa kweekhabhathi okanye izixhobo zombane, nokunye okuninzi.
Ixabiso eliqhelekileyo lokuhlengahlengisa ikhitshi elincinci limalunga ne- $ 18,500. Iya kufikelela kwi- $ 54,000 yokwenza ulungiso olukhulu lwekhitshi. Kuyimfuneko ngenene ukuba usete izinto eziphambili ngokubaluleka kwaye zilungelelane, ube bhetyebhetye, kwaye ukwazi ukuhlala kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho kangangoko kunokwenzeka ukugqiba iprojekthi.
Iikhabhathi ziya kudla amashumi amathathu ukuya kumashumi amane eepesenti kuhlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi yakho yokulungisa ikhitshi. Amaxabiso ekhabhathi ayahluka ngokhetho onokukhetha kulo ukuba uza kuyifaka kusini na ikhabethe, ulungise iikhabhathi esele zikhona, okanye ucokise iikhabhathi.
Ixabiso eliphakathi lofakelo lweekhabhathi ezintsha: $ 4,500
Kulindeleke ukuba uhlawule malunga ne-300-400 yeedola kwikontraka eya kususa iikhabhathi ezindala ngaphambi kokufakwa kwezi. Iikhabhathi zesitokhwe esinexabiso eliphantsi onokulufumana ukusuka kwi- $ 70-400 ngeenyawo nganye yomgama. Iikhabhathi ezinesiqhelo ziya kubiza i-160-950 yeedola ngenyawo zonke zomgama. Iikhabhathi ezenzelwe wena zinexabiso ngama- $ 500 ukuya kwi-1,500 yeenyawo ngonyawo ngalunye.
Ukubeka kwakhona iikhabhathi: $ 3,100
Xa ulungisa iikhabhathi kukho iindlela ezintathu. Oku kuyahluka ngamaxabiso kodwa ke kuwo omathathu amaxabiso sele ebandakanyiwe imathiriyeli kunye nofakelo.
o Umthi oqinileyo- $ 3,500-4,700
o Ezamanzi- $ 2,800-3,700
o I-thermofoil eqinileyo (RTF )- $ 2,100-3,000
Ukuphelisa iikhabhathi: $ 2,250
Izixhobo kunye nofakelo ziya kubiza phakathi kwe- $ 2,100-3,000.
Iitafile zinemathiriyeli eyahlukeneyo kwaye amaxabiso azo ayahluka.
-Iitafile zamatye (kubandakanya inyengane , I-quartz resin, i-marble kunye nelinye ilitye lendalo) - $ 4- $ 150 ngeenyawo zenyawo okanye malunga ne-120- $ 4,500 kwi-countertop yesiqhelo yekhitshi engama-30. Funda ngakumbi malunga Iindleko zemiphezulu yeetafile zemabhile Apha.
o Iithayile zelitye- $ 4-20 ngenyawo ngalinye lesikwere
Ilitye leSlab- $ 50- $ 150 ngenyawo ngalinye lesikwere
Iitafile zelaminethi- $ 7- $ 30 ngonyawo wesikwere okanye malunga ne- $ 210- $ 900 yeekhitshi eziqhelekileyo
Iitafile zomhlaba eziqinileyo- $ 40- $ 80 ngenyawo nganye yesikwere okanye ikhitshi eliqhelekileyo liya kubiza i-1,200- $ 2,400
Iitayile zokubala iithayile- $ 1- $ 255 ngonyawo wesikwere okanye malunga ne- $ 30- $ 7,650 yekhitshi eliqhelekileyo
Iitafile zeenkuni- $ 30- $ 105 ngenyawo ngalinye lesikwere okanye malunga ne- $ 900- $ 3,150 yekhitshi eliqhelekileyo
Iitafile zokugqibela eziphezulu ezibandakanya insimbi engenasici, ikhonkrithi kunye nobhedu- $ 75- $ 200 ngeenyawo zenyawo okanye ngaphezulu, okanye ikhitshi eliqhelekileyo liya kubiza i- $ 2,250- $ 6,000
Xa uthenga okanye ufaka ikhitshi phantsi, kubalulekile ukuba uthathe ingqalelo kwezi zinto zilandelayo:
- imbonakalo yomgangatho wekhitshi
- intuthuzelo yomgangatho wekhitshi
- kulula kangakanani ukufakwa kwikhitshi okanye ukususwa
-Ukunyamezela komgangatho wekhitshi
- ixabisa malini ikhitshi?
Uluhlu olungezantsi zizinto ezahlukeneyo ezisetyenziselwa ukutyibilika ekhitshini kunye neendleko zofakelo:
Iivesi zebhayibhile zamaxesha anzima kubudlelwane
-Iithayile ze-vinyl ze-intshi ezi-12-ixabiso eliqhelekileyo lofakelo lolu hlobo lophahla kwigumbi le-12 × 15-yeenyawo imalunga ne- $ 460 eyenziwa ngumfaki womgangatho. Ukuba ucwangcisa ukugcina malunga neepesenti ezingamashumi amane anesibini ngeendleko zabasebenzi, ungazithenga iithayile malunga ne- $ 285 kwaye uzenzele ngokwakho.
-Iphepha lomgangatho weVinyl- indleko ephakathi yalo mgangatho wegumbi le-10 × 12-yeenyawo eyenziweyo yinkqubo iya kuba malunga ne- $ 722. Ukucwangcisa ukuyenza ngokwakho ngokubhekisele kufakelo emva kokuthenga izixhobo kuya kukubiza nje i-465 yeedola.
-I-Linoleum-ikontraka lomgangatho liya kukucela ukuba ubhatale malunga ne- $ 1213 yofakelo lomgangatho kwi-12 × 15-yeenyawo-yegumbi. Ukuze ugcine iipesenti ezingamashumi amathathu anesine zeendleko zabasebenzi, ukuba ufakelo lwenziwe nguwe wakube uthenge izinto ziya kukuvumela ukuba uchithe i-795 yeedola.
- Iiplanki-igumbi le-15 × 20-yeenyawo kwigumbi lekhitshi ngumfakeli womgangatho oza kukuhlawulisa i-2,412. Ukwenza ufakelo ngokwakho xa unezinto zokusebenza kuya kukugcina amashumi amane anesixhenxe eepesenti kwaye uya kukuxabisa kuphela i-1,275 yeedola.
- Beka iithayile zekwari-indleko eziphakathi kwi-10 × 15-yeenyawo kwigumbi lokuphekela kwigumbi lekhontraktha yi-1,233 yeedola. Ukwenza umsebenzi wofakelo kuyakusindisa amashumi amahlanu anesibhozo eepesenti kwaye uza kukuvumela uchithe i-515 yeedola ukuthenga izinto.
Ukukhanyisa okusemgangathweni ekhitshini kunemisebenzi ethile ehambelana nendima yekhitshi ukuba ibe yindawo esebenza ngemisebenzi emininzi.
Ukukhanya okukufutshane kusetyenziselwa ukukhanyisa indawo yonke yekhitshi.
-Ukukhanya kwendalo- kusebenzisa iimveliso zetyhubhu yelanga ezifakwe eluphahleni okanye eludongeni lwangaphandle lwendlu emva koko kufakelwe idiskhi kwisilingi yekhitshi. Umbhobho unombala wezinto ezibonakalayo ezibonisa ukukhanya okufakwe kwi-diffuser nakwikhitshi. Ukufakwa kwezinto kunye nomsebenzi kuya kubiza i-350 yeedola kwikhitshi eliqhelekileyo.
Ukukhanya kwesilingi - kuluncedo kakhulu ngakumbi ngokuhlwa nasebusuku. Iindleko ngokulungiswa kwesibane se- $ 35 ukuya kwii-450 zama-450. Ngayo yonke into yokutshintsha kwe-dimmer, iya kukuhlawulisa i-10 ukuya kwi-65 yeedola.
- Izibane zePerimeter - izixhobo zefluorescent zifakwe zijikeleze umjikelezo wekhitshi. Indlela eyaziwayo yokwenza oku kukufakelwa kwendawo yokubamba yokubengezela ngaphezulu kweekhabhathi zekhitshi. Izixhobo zibiza i- $ 12 ukuya kwi-35 yeedola kulungiselelo ngalunye.
Izibane zomsebenzi zisetyenziselwa ukubonelela ngokukhanyisa iindawo ezithile zomsebenzi ezinjengeendawo zokubala.
Izibane zeFluorescent - ezisetyenziswa kwiindawo zomsebenzi ngokuthe ngqo phantsi okanye ngaphantsi kwekhabhinethi. Izinto eziphathekayo zibiza i- $ 15 ukuya kwi- $ 50 kuyo yonke into.
- Izibane zepuck-isibane esingaphantsi kwekhabhathi esibonelela ngokukhanya okugxininisiweyo ngakumbi kuneefluorescents. Iindleko ziyi- $ 10 yokukhanya kwepaki nganye kunye ne- $ 40 ukuya kwi- $ 50 ngepakethi yezibane ezintlanu zepuck.
- Ibha yokukhanya - isibane esingaphantsi kwekhabinethi esinezixhobo ezifakwe kwisibane esinye, ezibini, okanye ezintathu. Iindleko zezinto eziphathekayo yi- $ 20 ukuya kwi-500 yeedola exhomekeke kwinani lezibane zepuck ezisetyenziselwa isixhobo ngasinye. Iindleko zabasebenzi zii-25 ukuya kwi-50 zeedola ngeyure.
- Izibane zesilingi ezihlaziyiweyo- zibonelela ngokukhanya okwaneleyo ngokukhanya okungenasithunzi. Iindleko zezinto eziphathekayo zezi zilandelayo:
Izibane ezijingayo-isebenza kakuhle ngaphezulu kokuntywila nakwiziqithi. Iya kuxabisa i-10 ukuya kwi-55 yeedola ngekota nganye, i-500 yeedola kwispendant nganye ngentambo ye-telescoping, kunye ne-150 yeedola kuyo yonke indibaniselwano yombumbi okanye ukukhanya komsebenzi.
- Izibane zokulandela umkhondo -zisebenzisa izixhobo ezibonakalayo ezibonelela ngezibane ezizodwa. Intlawulo yethrekhi nganye enezibane ezisisigxina zii-30 ukuya kwi-130 zeedola kwaye zonke iitraki ezinezibane ezihambisekayo yi- $ 120 ukuya kwi- $ 270.
Ixabiso lokufakelwa kwesixhobo esimalunga ne- $ 115 kunye ne- $ 291. Ngezantsi zizinto eziqhelekileyo zekhitshi.
- Iifriji - amaxabiso aqala kwi $ 350 kwifriji ephezulu ukuya kwi- $ 2,500 yefriji esezantsi eneengcango zaseFrance nangamanzi emnyango.
- Uluhlu - lubiza i-350 yeedola kumanqanaba okungena kwinqanaba le-coil ene-oveni ecocekileyo ukuya kuthi ga kwi- $ 2,000 nangaphezulu kuluhlu olungenasiphelo lwe-fuel-eye ene-convection heating.
-I-Cooktops- uluhlu lweendleko ngama- $ 300 kwisiseko sokutshisa igesi esine-malunga ne-2,500 yeedola okanye ngaphezulu kwe- 36-intshi yepro-style cooktop.
I-oveni ye-Wall- iyakuxabisa i-700 yeedola yokungena kwinqanaba le-oveni enye efikelela kwi- $ 3,500 kwi-oveni ephindwe kabini yodonga olunokufudumeza kombane.
-Ingqondo yokungenisa umoya-amaxabiso asuka kwi- $ 175 ukuya kuthi ga kwi-2,500 yeedola ngokuxhomekeke kuhlobo.
Apha ngezantsi kukho itafile yexabiso lezinto eziqhelekileyo zokulungisa ikhitshi:
Iindleko zokukhetha uKhetho kwi-Order encinci, Mid-Range, kunye neMajor
Izixhobo $ 100- $ 300 / isixhobo, $ 400- $ 600 / isixhobo, $ 700- $ 900 / isixhobo
Iikhabhathi $ 1,200- $ 3,200, $ 3,500- $ 5,500, $ 6,500- $ 8,500
Amacwecwe ama- $ 900- $ 1,100, ama- $ 2,100- $ 4,100, ama- $ 5,100- $ 7,100
I-Faucet $ 130- $ 230 / faucet, $ 330- $ 430 / faucet, $ 530- $ 630 / itephu
Umgangatho wee-700- $ 1,700, i $ 1,800- $ 2,800, i $ 2,900- $ 3,900
Sink $ 500- $ 1,500, $ 1,600- $ 2,100, $ 2,200- $ 2,700
Zininzi izinto ezivela ngexesha leprojekthi yokulungisa izinto. Apha ngezantsi sizama ukuchaza ezinye zezona zinto zixhaphakileyo onokuthi ujongane nazo okanye ufuna ukuqaphela ukuphuculwa ngaphambi kokwenza ukulungiswa kwekhitshi.
Kubalulekile ukuba ikhitshi libe nezibane ezisemgangathweni ezifanelekileyo kuyilo olulungileyo kunye nomoya. Ikwabonelela ngamanyathelo okhuseleko ngakumbi xa uphethe iimela ezibukhali okanye ezinye izixhobo zasekhitshini kuba ukukhanya kukunika umbono ongcono wento oyenzayo. Ukuba nohlahlo-lwabiwo mali oluxineneyo akuyi kukuthintela ekuboneleleni ngokukhanya okuhle ekhitshini lakho.
Nazi iingcebiso ezininzi zokonga kwiindleko zokukhanyisa.
Izibane zokuncamathela - ezi ziluncedo phantsi kweekhabhathi ukubonelela ngokukhanya kwindawo yokusebenza kwe-countertop, ngaphezulu kwesinki, ngaphakathi kwidrowa emnyama, okanye kwiikona zekhabhathi. Iindleko zeziqwenga ezintathu ziyi- $ 10.
Isixhobo esiphathekayo esinemisebenzi enokwenziwa ngokwezifiso-isebenza ngeebhetri. Zonke trio zeentloko ezikhanyayo zijikeleza zodwa kunye nokuqaqamba kunokuhlengahlengiswa kusetyenziswa iswitshi. Isetyenziswa kakhulu kuye iipati okanye iikhabhathi ezinzulu. Iindleko zimalunga ne- $ 14.
Ukukhanya kwentambo ye-LED-ukuguquguquka kokuncamathisela okulula okuxabisa malunga ne- $ 25. Inceda ekukhanyiseni iinzwane zekhabinethi ezikhatywayo okanye ngaphezulu kwekhabhinethi.
Iiplagi zodonga ezifakelwa ngaphakathi-ezi zixhonywe ezindongeni ngeentambo zazo zixhonyiwe. Ezi zibiza malunga ne- $ 79.
Izibane ezijingayo-imisebenzi ngokwandisa isibane somsebenzi. Ixabiso layo li- $ 194.
Ukulungiswa kwekhitshi, kubalulekile ukuba ungahambisi izinto zombhobho okanye uya kuba uhlawula ngakumbi ukufakelwa kwemibhobho eyongezelelweyo ebiza ixabiso eliphakathi kwe- $ 1,100. Ukufuduswa kwemibhobho kuya kwenziwa kulungiso olukhulu okanye uhlengahlengiso lwesinki, isitya sokuhlambela izitya, okanye isixhobo sokwenza icem. Iyakuvumela ukuba uchithe iindleko eziphezulu zabasebenzi njenge- $ 800 eyongezelelweyo.
Kangangoko kunokwenzeka, kuphephe ukuhambisa imigca yegesi. Kubiza imali eninzi ukunyusa lonke iindleko zeprojekthi yokulungisa ikhitshi. Kubiza imali eninzi kuba kuya kufuneka ushukumise kwaye usebenze ngakumbi kwimigca yegesi ekhitshini kwaye uya kunyusa umgangatho uze unkqonkqoze iindonga ukuze ufike kwimigca yegesi. Ngokusisiseko, iindleko zixhomekeke kwixabiso lekhontraktha ngamaxabiso ngeyure.
Kuya kufuneka uqiniseke ngokubeka bucala malunga neepesenti ezingama-20 kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho lweprojekthi yokulungisa ikhitshi kuba ngokuqinisekileyo kuya kubakho iindleko ezothusayo eziza kuvela. Oku kuhlala kwenzeka xa kukho izinto ezingalindelekanga kunye nezinto osele uzithengile okanye kukho utshintsho kwizicwangciso. Ukuba nohlahlo-lwabiwo mali olungasetyenziswanga kuyakuvumela ukuba ubonelele iindleko ezingalindelekanga kwaye kukukhokelele ekugqibeni iprojekthi yasekhitshini.
Kubalulekile ukuba wenze amalungiselelo ayimfuneko xa uceba ukwenza iprojekthi yokulungisa ikhitshi ukuze ubenombutho kwaye uya kuthi uhambe kwinkqubo yokulungisa kakuhle. Ngaphambi kokuqala kokulungiswa, kuya kufuneka ukhusele izinto ofuna ukuzigcina njengezixhobo, iikhabhathi zomgangatho, okanye izixhobo.
Ukwenzela ukunciphisa uthuli nobumdaka kwezinye iindawo zendlu, tywina indawo yekhitshi. Qeshisa kwaye ube neshedyuli yokuhanjiswa kwenkunkuma yezinto zakho ongasazifuniyo okanye ongazisebenzisiyo kwakhona. Yenza amalungiselelo namaqela esisa xa ususa izinto ezinokusetyenziswa zokwakha, izixhobo, iikhabhathi, izixhobo zombane, okanye izixhobo zentsimbi emva kokudiliza.
Ngenisa isampulu ye-linoleum kuvavanyo lwe-asbestos. Ukuba iziphumo ziqinisekile, yenza amalungiselelo kunye neqela lokunciphisa ukuze kususwe umgangatho. Ukuba iziphumo azibi, ungenza ngokukhuselekileyo ususe umgangatho.
Apha ngezantsi kukho amanyathelo alula onokuthi uwaqwalasele xa ulungiselela ukulungiswa kweekhitshi:
Hlanganisa izinto oya kuthi ngokuqinisekileyo uzidinge kwaye ezi ziquka iibhokisi, izinto zokupakisha, amaphephandaba, iteyiphu yokufihla, ukupakisha iteyiphu, iingxowa zokugcina iplastiki ngobukhulu bekota okanye ubungakanani begalon, kunye neziphawuli.
Fumana izinto ozisebenzisa mihla le njengezinto ezenza ikofu, iimbiza, iketile yeeti, izitya ezixubayo, izikeyiti, izitya zokuvula, izitya zokupheka kunye neeleta zemifuno. Unokusebenzisa iipleyiti ezilahlwayo, iikomityi kunye nesitya sangokuhlwa. Ungalibali ukuba neziqulatho zokugcina ezishiyekileyo. Ngaphezu koko, kufuneka kubekho izinto zokucoca.
Cima imibhobho yamanzi, irhasi kunye nombane wekhitshi.
Nqamula imibhobho yokuhambisa amanzi kunye nemibhobho yamanzi kwisinki, kwindawo yokuhlambela impahla, nakwifriji.
Susa uqhagamshelo lwegesi kwi-oveni kunye nombane ukusuka kwizixhobo ezisebenza ngqo eludongeni.
Susa izithambiso zeglasi kulungiso lwezibane, iirejista zobushushu, izigqumathelo zokuphuma, kunye nokugquma iifestile.
Susa izixhobo zombane kunye nesinki kunye nezifakelo zombane. Ukuba isinki ingaphezulu kwekhawuntara phezulu yiphakamise.
Susa isiseko kunye nephezulu iikhabhathi zasekhitshini Ngokusebenzisa ukubola okanye ibhari.
Fumana udonga oludala olomileyo emva koko utyabeke udonga kunye nophahla ngokusebenzisa i-pry-bar. Khupha iinzipho kunye nokugquma.
Coca inkunkuma kwaye ucoce uthuli kunye nobumdaka ukulungiselela ukufakwa kwekhitshi elitsha.
into enombono oluhlaza kumtshakazi
Ikhitshi lamagcisa lale mihla
iilokhwe eziqhelekileyo zaselwandle kwiindwendwe zomtshato
Isoftware yokulungisa indawo yangasese
yimalini ekufuneka ndiyichithe kumsesane womtshato